Sarkaal sare oo Al-Shabaab ah oo isku soo dhiibay gacanta dowlada federaalka Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaSarkaal sare oo Al-Shabaab ah oo isku soo dhiibay gacanta dowlada federaalka Soomaaliya
August 30, 2016 Abdi Omar Bile Somalia 0
Ibraahim Aadan Ibraahim oo ahaa sarkaal sare oo Al-Shabaab ah oo isku soo dhiibay dowlada federaalka Soomaaliya.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Sarkaal sare oo katirsan kooxda hubaysan ee Al-Shabaab ayaa isku soo dhiibay dowlada federaalka Soomaaliya.
Ibraahim Aadan Ibraahim oo ahaa madaxa Al-Shabaab u qaabilsan waxbarashada gobolada Baay iyo Bakool ayaa xalay oo Isniin ahayd shir saxaafadeed uu ku qabtay magaalada Muqdisho ku sheegay inuu isaga baxay kooxdiisa hore ee Al-Shabaab.
Isaga oo la hadlayay warbaahinta, Ibraahim ayaa sheegay inuu ka faa’iidaystay cafiskii madaxweynaha uuna ka baxay fikirkii Al-Shabaab, wuxuu xusay inuu Al-Shabaab kamid ahaa muddo ka badan 9-sanno.
Dowlada federaalka Soomaaliya oo dagaal kula jirta kooxda Al-Shabaab ayaa horey u fidisay cafisyo ciddii kasoo baxda afkaarta Al-Shabaab.
Saraakiil sar-sare ayaa horey isugu soo dhiibay gacanta dowlada federaalka Soomaaliya.
Dhanka kale, dowlada federaalka Soomaaliya ayaa soo dhaweysay isa soo dhiibida Ibraahim.
Wasiirka amniga qaranka Cabdirisaaq Cumar ayaa wakaalada wararka dowlada Soomaaliya ee Sonna u sheegay in dowlada ay soo dhaweynayso saraakiisha Al-Shabaab ee kasoo noqda afgaarta Al-Shabaab.
Al-Shabaab oo xiriir la leh urur weynaha Al-Qaacida ayaa dagaal kula jirta dowlada federaalka Soomaaliya oo caalamka taageero, maleeshiyada ayaa sanadadii u dambeeyay laga saaray dhul badan oo ay ku xooganayd.
April 10, 2017 Ugu yaraan lix askari oo lagu dilay kadib markii qof isa soo miidaamiyay uu isku qarxiyay xero milatari oo kutaala duleedka Muqdisho
February 23, 2018 Ugu yaraan saddex qof oo ku dhimatay qaraxyo ka dhacay Muqdisho
August 16, 2017 Mareykanka oo ku ammaanay dowladda Soomaaliya dadaalka ay ugu jirto sidii loo xoojin lahaa isa soo dhiibida Al-Shabaab
Ugu yaraan 45 qof oo ku dhimatay weerar isbiimayn ah oo ka dhacay dalka Yemen oo ay masuuliyadiisa sheegatay ISIS
Mid kamid ah dablaydii dhaawacday Kornayl Xaaji Cariish oo ku dhintay koonfurta Gaalkacyo
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Mid kamid ah dablaydii ku dhaawacday Kornayl Xaaji Cariish gudaha magaalada Gaalkacyo ayaa geeriyooday, sida goobjooge ku sugan gudaha xaafada Wadajir ee koonfurta magaalada Gaalkacyo halkaas oo uu ninku ku geeriyooday uu u [...]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Warshada ugu weyn ee soo-saarta biyaha la cabo ee caagadaha ayaa laga furay magaalada Gaalkacyo shalay oo Axad ahayd. Saleebaan Cabdi Cali oo kamid ah ganacsatada reer Puntland ee shirkada oo magaceeda la [...]
Ciidamada Libya oo sheegay in ay magaalada Sirte kala wareegeen maleeshiyada ISIS
Sirte-(Puntland Mirror) Ciidamada dowladda ay dabada ka riixayso Qaramada Midoobay ee Libya ayaa isku fidiyay maamulida magaalada Sirte kadib bilo dagaal ah, sida uu sheegay afhayeen ciidamada ah. “Ciidamadayadu waxay haystaan gabi ahaan Sirte,” Reda [...]